Mabhuku manomwe aSeneca ehungwaru, basa rakakosha | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Bvunzo, Vanyori, Type, Mabhuku, Literature, dzakawanda
Seneca, muzivi munyori weThe Seven Books of Wisdom.
Seneca (4 BC-AD 65) Akanga ari iye ane simba rakakura kwazvo wechiLatin wechiStoic munyika. Basa remunyori, mune zvese, inhaka yenyika, gwara remweya kune chero munhu anosvika padyo nekuriverenga.
Mutungamiriri ane mbiri weRoma anobata muzvinyorwa zvake madingindira akajairika ehupenyu hwezuva nezuva, asi nenzira yakadzika uye yekuongorora. Seneca akanyora nezve hupfupi hwehupenyu, kufa, nehuMwari hwaMwari, hurombo nehupfumi, uye nemabatirwo emunhu mufaro wake kana kusuwa kumatunhu aya. En Iwo mabhuku manomwe ehungwaru inotungamira munhu munzira dzehupenyu. Hazvishamise kuti inofanirwa kuverengerwa pakati mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveSpanish.
1 Nhungamiro Yakakwana kuHupenyu Pachayo
1.3 Bhuku rechitatu
1.4 Bhuku rechina
1.5 Chechishanu bhuku
1.6 Rechitanhatu bhuku
1.7 Bhuku rechinomwe
2 Nhaka yaSeneca
Nhungamiro Yakakwana kuHupenyu Pachayo
Pakati pe Iwo mabhuku manomwe ehungwaru iwe unogona kunzwa kuunganidzwa kweruzivo uye zviitiko izvo Seneca zvaakakwanisa kuwana muhupenyu hwake. Mukupfupisa, iwo mabhuku ari pamusoro peanotevera:
Pano munyori anotifambisa nepfungwa yake yehuMwari hwaMwari uye kunaka kwake kuvanhu.
Muchikamu chino Seneca inotaura zvinoenderana nemurume uye nemabatiro aanofanira kuita hupenyu hwake kubva pane zvinomurwadza Hutsvene Hwako.
Este Izvo ndezve maitiro ekudzikama mukutarisana nezvinowanzoitika matambudziko anounzwa noupenyu.
Pano Seneca anoratidza chingave chimwe chezvipo zvake zvakakosha, zvemaitiro ekuwana huchenjeri. Muzivi anoratidza kune uyo anoverenga kuti nzira chete yekuwana zivo yechokwadi ndeyekuedza. Kugara, kutsungirira, uye kudzidza kwechokwadi zvinopa huchenjeri hwechokwadi.
Nero naSeneca, chivezwa.
Mubhuku rino ndemumwe wemisoro yakanyanya kufukidzwa nemunhu, chii chine hukama nekupfupika uye nekukurumidza kwehupenyu. Seneca zvakare anoita ratidziro yakadzama pamusoro perufu pano.
Muchikamu chino Seneca inobata nemaitiro ekugadzirisa kushungurudzika, uye inotsvaga kuti inzwisise kuti kusuwa kwese kunotumirwa naMwari kuti munhu arege kutendeuka uye mweya wake nemweya zvosimbiswa. Zvinoenderana nemuzivi, munhu mumwe nemumwe anofanira, saka, kutarisa izvo zvakanaka zviri mune zvakaipa zvinomukunda.
Mubhuku rino muzivi anoita ratidziro yakadzama pamusoro wenyaya wehurombo. Seneca anoti hurombo hunogona kushanda sekutsigira kukunda, nekuti zvinoshandira munhu kuzvizadza neushingi uye kutarisana nenhamo pachayo.
Kunyangwe nanhasi, zviuru zviviri zvemakore gare gare, basa raSeneca richiri kushanda munzvimbo zhinji dzepasi. Zviuru zvinomuverenga uye zvinotevera kuraira kwake uye nekushandisa huchenjeri hwake muhupenyu hwavo. Zvinyorwa zvake zvinoratidza kufunga kwake, uye kufunga kwake chibereko chakananga cheakaitika muhupenyu hwake.
Uye kunyangwe akashoropodzwa zvikuru nekuti akagadzirisa nyaya idzi dzese kubva kunzvimbo yehupfumi, lkana ichokwadi kuti chinyoreso chake nehupamhi uye nenzira yakakwirira maakaratidza pfungwa dzake zvinomutsigira. Zvirokwazvo, Iwo mabhuku manomwe ehungwaru es basa rakakodzera kupihwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku manomwe eSeneca eUchenjeri